Interview | Artist Khabar
Interview	मोडलिङ कस्तो हो भन्ने कुरा हेर्ने नजरमा भर पर्छः मोडल मोनिका बुढाथोकी	पुस, काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली मोडलिङ क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने धेरै नयाँ मोडलहरु आफ्नो करियर बनाउन यसक्षेत्रमा लागेका धेरै भेटिन्छन । तर करियरको लागि यसक्षेत्रमा प्रवेश गर्नेको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएपनि यसक्षेत्रमा भविष्य छैन भन्दै मोडलिङ् क्षेत्रको सपना पनि देख्न छाडिसकेका छन् धेरैले । तर यति बेला मोडलिङ क्षेत्र छोड्नेको..	पैसा दिएको हैन, मेरो अभिनय हेरेरै चलचित्रमा अफर गर्नुभएको होः नवनायक सुमन थापा	गोपिकृष्ण चापागाई / काठमाडौं । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा उदाउँदै गरेका नव नायक सुमन थापा यतिखेर म्युजीक भिडियोहरुमा मोडलिङ तथा चलचित्रहरुको अभिनयमै ब्यस्त छन् । चलचित्र ‘युज’ बाट डेब्यु गरेका सुमनले अहिलेसम्म दर्जनौं म्युजीक भिडियोहरुमा अभिनय गरीसकेका छन् भने उनले अभिनय गरेको ‘द फेमस’ चलचित्र अझै पनि केहि हलहरुमा लागिरहेको छ..	पैसा नखन्याई कलाकार बन्न धेरै गाह्रो रहेछः गायिका मिरा गिरी	कार्तिक, काठमाडौं । नेपाली लोकगीत क्षेत्रमा आफुलाई स्थापित गराउँदै गरेकी गायिका हुन् मिरा गिरी । अहिले सम्म उनले दर्जनौं गीतहरुमा स्वर दिइसकेकी छिन् । साथै आँफैले लगानी गरेर पनि उनले अहिलेसम्म १५ वटा गीत बजारमा ल्याइसकेकी छिन् । गीतसंगीतको क्षेत्रमा लागेको जम्मा तिनबर्ष पुगेको बताउने मिराले गीतमा स्वर दिनुका साथै शब्दहरु पनि कोर्ने..	माया फेक हुन्छ जस्तो लाग्दैन, गरुन्जेलको माया त माया नै होनिः गायक सुनिल गिरी	कार्तिक, काठमाडौं । आज भन्दा तिनबर्ष अघिबाट गुन्जिएको ‘को होला त्यो म सँग आँखा जुधाउने' बोलको गीत आजको दिनसम्म पनि उत्तिकै मात्रामा गुन्जिरहेको पाउँछौं । त्यसैगीतबाट आफुलाई गायकको रुपमा स्थापित गराएका गायक हुन् सुनिल गिरी ।
गायक सुनिल गीतसंगीतको क्षेत्रमा लागेको एक दशक पुग्न लागेता पनि गायक भएर पहिलो गीत बजारमा ल्याएको भने तिनबर्ष..	२५० म्युजीक भिडियो गरीसकेका महेन्द्र भन्छन, ‘अहिलेसम्म सेक्सी मोडल त खासै भेटिन’	माघ, काठमाडौं । नेपाली म्युजीक भिडियोको क्षेत्रमा करिब २५० भन्दा बढिमा अभिनय गरीसकेका मोडल महेन्द्र गौतम अहिले पनि उत्तिकै ब्यस्त छन् । आधुनिक भन्दा लोक दोहोरी गीत कै भिडियोमा बढि देखिने महेन्द्र लोकदोहोरी मोडल भनेर पनि चिनिन्छन् । रोमान्टिक र सेन्टिमेन्टेल दुबै प्रकारका गीतहरुमा फिट देखिने महेन्द्रसँग आर्टिस्ट खबरका लागी गोपिकृष्ण..	शब्द लेख्ने बिनोद ढकालले कौडा गित गाए – Interview	मंसिर ८, काठमाडौं । गितमा शब्द लेखेरै नाम कमाउँन सफल बनेका शब्द लेखक बिनोद ढकाल पछिल्लो समय गायन तर्फ पनि लागेका छन् । शब्द लेखनका साथमा आफु अब गायन तर्फ पनि अगाडि बढेको उनी बताउँछन् । पछिल्लो समय बिवादमा र चर्चामा रहेको तिज गित ढाडे बिरालोका शब्द लेखक समेत रहेको बिनोदले भर्खरै मात्र कौडा गित पनि गाएका छन् । शब्द लेखक बिनोद नेपाल सरकारको..	सुरुमा स्टुडियो देख्दा गाउने होसै हरायोः गायक सुजन बराइली	कात्तिक २२, काठमाडौं । एक दशक दोहोरी साँझ सञ्चालन गरेर पछि गायक बनेका गायक सुजन बराइली अहिले गायन क्षेत्रमा जम्ने प्रयासमा छन् । जन्म घर पर्बत भएका बराईलीले बि.सं २०६० सालमा पहिलो एल्बम 'सम्झना छ मनैमा' बजारमा ल्याएका थिए । उनले अहिले ५ ओटा गीत रेकर्ड गरिसकेका छन् । गायक सुजन बराइली सँग बिरेन्द्र ओलीले गर्नुभएको कुराकानीः
हालसम्म कतिवटा..	व्यावशाय सँगै मोडलिङमा बिकास, भन्छन् इच्छा भएर मात्र हुँदैन	असोज, काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली कलाकारीता क्षेत्रमा छिर्नेहरु धेरै छन् । अन्य केही गर्न सकिएन भने कलाकारितामा जानुपर्छ कि भन्ने मनसाय राख्नेहरु पनि कलाकारीतामा आउने गरेको पाइन्छ भने कोहि कलालाई नै सर्वश्व मानेर र आफ्नो उद्देश्य नै कलाकारिता मानेर आउनेहरु पनि छन् । यसबिच व्यावशाय गर्दै आएका विकास न्यौपाने पनि भर्खर मात्र कलकारीता..	सेक्स प्रस्ताव गर्ने कसैले आँटै गरेनन्ः मोडल सृजना	असोज, काठमाडौं । भर्खर १७ बर्ष पुगीन् सृजना बस्नेत । चट्ट जिउँ मिलेकी हेर्दा राम्री सृर्जना मोडलिङ क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोज्दा ६ महिना अघि सायद शहदेव कोइराला सँग भेट नभएको भए यो क्षेत्रमा हुने थिइनन् होला । आधा दर्जन म्युजीक भिडियोमा मोडलिङ गरीसकेकी सृजना बस्नेतले प्रविन भट्टको निर्देशनमा र अन्जु पन्तको स्वरमा रहेको “हाँसे होला बोलें..	सबैको प्रेम प्रस्ताव एसेप्ट गर्छिन् मोडल तथा गायिका सिर्जु अधिकारी	असोज, काठमाडौं । सांगितिक क्षेत्रमा आठ बर्ष पुरा गरीसकेकी मोडल तथा गायिका सिर्जु अधिकारी यतिखेरकी व्यस्त मोडल तथा गायिकाको रुपमा परिचित छिन् । दाङको तुलसीपुर नगरपालीका वडा नं. ४ मा जन्मिएकी सिर्जु मोडलिङ र गायन क्षेत्र दुबै बाट परिचित छिन् । उनले आफु तिजको गितबाट सांगितिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेको बताउँछिन् । अहिलेसम्म डेढ दर्जन गित मा..	Pages:12»